laacib » Barcelona oo garoonka Camp Nou ku xasuuqday Celta Vigo kulan Lionel Messi & Jordi Alba ay wacdaro dhigeen qeybta hore.
Barcelona oo garoonka Camp Nou ku xasuuqday Celta Vigo kulan Lionel Messi & Jordi Alba ay wacdaro dhigeen qeybta hore.
Barcelona ayaa si qurux badan ugu gudubtay wareega quarter finalka tartanka Copa del Rey kadib markii ay Camp Nou ku xasuuqday Celta Vigo kulankii lugta labaad wareega 16-ka kulan ay Messi iyo Jordi Alba wacdaro dhigeen qeybta hore ciyaarta.
Blaugrana wuxuu kulanka u bilowday iyadoo lugtii hore ay 1-1 kusoo kala baxeen labada kooxood garoonka Baladios, walow kulankaas uu Valverde nasiyay inta ugu badan xidigahiisa ugu muhiimsan.
Si kastaba kulankii soo dhamaaday wuxuu ahaa mid saameyntiisa leh, waxaana si fiican u shaqeeyay Lionel Messi iyo Jordi Alba kuwaas oo sadex gool gacan ka geystay, aad bey isku caawiyeen labada xidig ee aadka isku fahmay.
GOAL: Daqiiqadii 13-aad: Lionel Messi ayaa shabaqa soo taabtay markii uu kubad qurux badan daba mariyay goolhayaha Celta Vigo, Jordi Alba ayaa dhinac ka keenay si fiican ayuu dhulka ugu garaacay.
GOAL: Daqiiqadii 15-aad: Mar kale Messi si qurux badan ayuu kubad ugu dhibtay Alba, isla durba waa loo soo celiyay taasoo u sahashay isagoo ku sugan xerada ganaaxa inuu si joog hoose ah u daba mariyo goolhayaha.
GOAL: Daqiiqadi 28-aad: Jordi Alba ayaa dhaliyay gool, wuxuu dhameystiray kubad uu Lionel Messi ka abuuray meel aan la maleysan karin, wuxuu ahaa goolkii sadexaad ee uu Messi ka qeyb qaato iyo midkii sadexaad oo uu Alba ka qeyb qaato.
GOAL: Daqiiqadii 31-aad: Luis Suarez ayaa dhaliyay goolka sii dilay niyadda Celta Vigo kadib markii uu caawinaad lama filaan ah ka helay Sisto oo kubad damcay inuu gaarsiiyo goolhayahiisa, dhexda ayuu ka qabsaday xidiga reer Uruguay – si awood leh ayuuna gool ugu badalay.
Qeybta hore ciyaarta ayaa lagu kala maray 4-0, oo ay ku hogaamineyso Barcelona iyadoo Philippe Coutinho uu ka daawanayay tarabuunka ciyaarta.
Qeybtii labaad markii la isku soo laabtay, Barcelona halkeedii ayey kasii bilowday cadaadiska ay saareyso goolka Celta Vigo, walow aysan ku guuleysan iney gool dhaliso ilaa daqiiqadahii ugu dambeeyay ciyaarta.
GOAL: Daqiiqadii 87-aad: Ivan Rakitic ayaa shabaqa soo taabtay, wuxuu ahaa madax – si xoor ah ayuuna ugu dhuftay si xoogan waliba taasoo keentay inuu awoodi waayo goolhaye Sergio inuu badbaadiyo.
Natiijada waxey ku dhamaatay Barcelona oo 5-0 ku dhufatay Celta Vigo, isku cel-celis ahaan waxey wareega xiga ugu gudubtay laacibkii reer Catalonia 6-1.